नायक पल शाहः ‘रियल हिरो’ कि प्ले-ब्वाई ? (पल काण्ड भिडियो सहित !!)
सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा ‘रिलेसनसीप’ लाई साह्रै हल्कारुपमा लिने गरिन्छ भन्ने धेरैले सोच्छन् । पत्रकार प्रकाश सुवेदीले केही परोपकारी काम गरेका पल शाहलाई ‘रियल हिरो’ को उपाधि दिए । यद्यपि फिल्मी सर्कलमा भने उनलाई धेरैले ‘प्ले–ब्वाई’ का रुपमा चिने गरेको चर्चा चलिरहेको छ ।
गायिकासँगको स्क्यान्डलपछि उनी निकै विवादित बने । उक्त स्क्यान्डलले अझै निकास नपाइरहँदा पलले युवतीहरुसँग पनि विवाहको वाचा गरेर समानान्तर रिलेसनसीपमा बसेको प्रमाणहरु भेटिएको नेपाल प्रेस अनलाइनले छापेको छ । ।
हुन त यो व्यक्तिगत जीवनको मामला हो । आममानिस भइदिएको भए चर्चाको विषय नै बन्थेन । तर, पल एक पब्लिक फिगर हुन् । युवायुवतीका आइडल पनि । त्यसैले उनको निजी जीवनका उतारचढावमा धेरैको चासो रहन्छ र ती मिडियाका विषयवस्तु पनि बन्न पुग्छन् । बाहिर ‘रियल हिरो’ को रूपमा चर्चित उनी भित्र कस्तो दूषित जीवन बाँचिरहेका छन् भन्नेबारे चर्चा भएको छ ।
विश्वास गर्न कठिन होला, ‘रियल हिरो’ एकैसाथ कम्तिमा चारजना युवतीहरुसँग अफेयरमा थिए भन्ने नेपाल प्रेसअनलाइनले खबर छापेको छ । यो पछिल्लो दुई वर्षभित्रको कुरा हो । त्यसो त जुन फिल्म वा म्युजिक भिडियोमा काम गर्यो, त्यसकै महिला कलाकारसँग पलको नाम जोडिने गरेको छ । उनको बारेमा निकटस्थहरु भन्ने गर्छन्, नयाँ–नयाँ युवतीहरुसँग हिमचिम बढाउने र सम्वन्ध राख्ने लतमा परेका छन् उनी । विगतमा नायक भुवन केसी यस्तो मामलामा विवादित थिए ।
कुनै बेला टेलिभिजनमा भिडियो एडिटरका रुपमा काम गर्न पल शाह म्युजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा आएका हुन् । भिडियोमा अत्यधिक सफलता पाएपश्चात ‘नाई नभन्नु ल’ सिरिजबाट उनले चलचित्रमा डेब्यू गरे । दोस्रो चलचित्र ‘सत्रु गते’ मा काम गर्दैगर्दा सो चलचित्रकी नायिका आँचल शर्मासँग पलको नाम जोडियो । उनीहरुको अफेयरको चर्चा मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती बनेको थियो । यद्यपि, उनीहरुले आफूहरु सम्बन्धमा रहेको सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गरेनन् ।
आँचलसँग अलग भएसँगै पलको सम्बन्ध जोडियो पेमा गुरुङसँग । उनी पहिले फ्यानको हिसाबले पलसँग नजिकिएकी थिइन् । फ्यान र स्टारको सम्बन्ध चाँडै ‘अफेयर’ मा बदलियो । दुई वर्षअघि नै पेमाले पललाई आफ्नो परिवारसँग भेटाएर विवाहको निधो गराएकी थिइन् । पलले पेमाको परिवारसँग आफूहरुबीचको प्रेम स्वीकार्दै विवाह गर्ने वाचा गरे । त्यो वाचामा पेमा अहिले पनि ढुक्क छिन् । योबीचमा उनी अध्ययनका लागि केही समय विदेश बसिन् । अहिले नेपाल फर्किएकी छन् । पल र पेमाबीच अफेयर जारी छ ।
पेमासँग सम्बन्धमा हुँदाहुँदै पल समिक्षासँग नजिकिए । समिक्षा पनि पहिल्यैबाट पलकी फ्यान थिइन् । करिब १० महिना अगाडि ‘सुर्ति माड्दै’ बोलको गीतको सुटिङका क्रममा उनीहरुबीच मित्रता भएको थियो । मित्रतालाई प्रेममा परिणत हुन समय लागेन । समिक्षा पलसँग छुट्नै नसक्ने गरी गहिरो प्रेममा डुबिन् । समिक्षासँगै पलले म्युजिक भिडियोकी एक मोडलसँग पनि हिमचिम बढाइरहेका थिए । यो थाहा पाएपछि समिक्षा र ती मोडलको झ गडा परेको थियो । भिडियो सुटिङका लागि एउटा होटलमा सँगै बस्दा यो घटना भएको हो । समिक्षाको स्क्यान्डल बाहिरिएसँगै ती किशोरी मोडल पलसँग टाढा भइन् ।
केही समयको निकटता पछि पल पनि समिक्षासँग टाढिने प्रयासमा लागे । फोन र म्यासेजको रेस्पोन्स नगर्ने र भेट्न पनि इन्कार गर्न थालेपछि गायिका निकै छट्पटाइन् । केही नलागेपछि पलविरुद्ध प्रहरीमा सप्रमाण उजुरी गर्ने र आफूसँग भएको फोटो/भिडियो सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी उनले दिइन् । त्यसपछि पलले समिक्षासँग दुई वर्षपछि बिहे गर्ने गरी परिवारको रोहबरमा सम्झौता गरेको खबर बाहिरियो ।
पलको सम्बन्ध सामाजिक र कानूनीरुपमा समेत यसकारण गलत थियो कि समिक्षा उमेरले नाबालिग (हाल १७ वर्ष) नै छिन् । यदि प्रमाणसहित प्रहरीमा उजुरी गरेको खण्डमा पललाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले उनी समिक्षासँग प्रेम नभए पनि बिहेको सम्झौता गर्न वाध्य भएका थिए । पलले दुई वर्षपछि विवाह गर्ने सहमति गरेको विषयमा नेपाल प्रेसले गत कात्तिक ५ गते खुलासा गरेको थियो । पछि पलले खण्डन गरेका थिए भने गायिकालाई पनि फकाएर खण्डन हाल्न लगाएका थिए । फेसबुकमा स्टाटस राख्दै दुवैले आफूहरुबीच प्रेम सम्बन्ध नरहेको दावी गरेका थिए ।
तर, त्यसबेला लेखेको स्टाटस समिक्षाका घाँडो भयो । फलतः गत माघ ६ गते उनले पहिलेको स्टाटसमा लेखेका कुराहरु वास्तविकता भन्दा टाढा रहेको भन्दै अर्को स्टाटस लेखिन् । त्यसमा उनले चाँडै यथार्थ सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । यथार्थ यही नै हो कि पल र समिक्षा अन्तरंग सम्बन्धमा थिए । तर, उनीहरु दुवैका लागि यो सम्बन्धका आयामहरु फरक भइदिए । समिक्षा पललाई दिलोज्यानले चाहन्थिन् र चाहन्छिन् । तर, पलको लागि यो फगत ‘टाइम पास’ थियो ।
यसअघी असाबधानिबस पिडितको नाम र फोटो उल्लेख भएकोले सच्याईएको छ । यसबाट पर्न गएको असुबिधा प्रति “नेपालय टाइम्स टिम” माफि चाहन्छौँ
२०७८ फाल्गुन १०, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 237 Views